“ရာဇာသံချောင်း” နှင်.”သုံးရက်ကြိုပြီးဘွတ်ကင်လုပ်” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aha! Jokes, Satire » “ရာဇာသံချောင်း” နှင်.”သုံးရက်ကြိုပြီးဘွတ်ကင်လုပ်”
Posted by မောင်ရိုး on May 10, 2012 in Aha! Jokes, Satire, Short Story | 20 comments
၂၀၁၄ ခုနှစ် ပူပြင်းလှသောနွေရာသီ၏ နေ.တစ်နေ. ……။
သံချောင်းနေထိုင်ရာဖြစ်သော ပေါရိသာဒ သင်္ချိုင်းတွင်းသို.၀င်လိုက်သည်နှင်.ဆိုင်းဘုတ်ခတ်ကြီးကြီးတစ်ခုကဆီးကြို
လျက်ရှိသည် ။ ကိုယ်.မျက်လုံးပင်ကိုယ်မယုံ နှစ်ခါပြန်၍ ဖတ်ကြည်.မိသည် ။
” ရာဇာသံချောင်း နာရေးအထွေထွေဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း” တဲ.
သုဘရာဇာသံချောင်းသည် ရာဇာသံချောင်းဖြစ်၍နေပေပြီ ……ယခင်က ပေါက်တူးတစ်ချောင်းဖြင်. အုပ်ဂူကြားတွင်
တွေ.ရသောသံချောင်းသည် ယခုအခါတွင် အပြောင်းလဲကြီးပြောင်းလဲ၍နေပြီဖြစ်သည်။
သံချောင်း၏အသွင်သဏ္ဍန်ကိုကြည်.ပါဦး …..ခါးတွင် မဲမဲပြားပြားလေးနှစ်ခုကိုချိတ်၍ နားရွက်နှစ်ဘက်တွင်လည်း
ချိတ်ကောက်လေးနှင်. ……ဘာပါလိမ်.ဟူ၍ သေချာကြည်.လေမှ သိရသည် ။
လွန်စွာအလုပ်များလေသောရာဇာသံချောင်းသည်ကား တယ်လီဖုန်းနှစ်လုံးအား ခါးတွင်ချိတ်၍ နားရွက်တွင်လည်း
Bluetooth တပ်ဆင်ထားခြင်းဖြစ်လေတော.သည် ။
ယခင်သံချောင်းနှင်. ယခုသံချောင်းအကွာကြီးကွာခြားသွားလေပြီ ။ အလောင်းမြှုတ်ရန် ပေါက်တူးဖြင်.မြေမတူးတော. …
စည်ပင်သာယာတွင်မြောင်းပုတ်ဖေါ်သည်.မြေတူးစက်ပေါက်စလေးအား အဟောင်းအစုတ်လေလံတွင် ဈေးပေါပေါနှင်.
၀ယ်၍ မြေတူးသည်မို. စက်မှုဖွံ.ဖြိုးသော နိုင်ငံတော်ကြီးနှင်. ရှေ.သွားနောက်လိုက်ညီနေသယောင် ……။
သို.နှင်. ….. ရာဇာသံချောင်း အကြောင်းတွေးနေခိုက် အနားသို. ကားတစ်စီး လာရပ်သဖြင်. ကြည်.လိုက်လေရာ ….
” ဗျို. …ကိုဆာမိ ဘာတွေကြည်.နေတာလဲဗျ ” ဟု ကားပေါ်မှ သံချောင်းမှ စ၍ နှုတ်ဆက်လေတော.သည် ။
” သံချောင်း …အဲ ..ရာဇာသံချောင်း …ဘယ်ကလာတာလဲကွ ၊ ကားတွေဘာတွေနဲ.ပါလား …”
သံချောင်းစီးလာသော ရန်ကုန်မြို.မှ နယ်နှင်လိုက်သည်. 90 မော်ဒယ် ဆန်နီဆူပါဆလွန်းအလုံး ကားလေးကိုကြည်.ရင်း
” အေးဗျာ …ကျုပ်မလဲ ကားတစ်စီးရပြီးကတဲက မနားရပါဘူးဗျာ …မိန်းမဈေးကြို ၊ ကလေးကျောင်းပို.နဲ. …ဒီကြားထဲ
အသုဘ၀န်ဆောင်မှု ကိစ္စတွေကလည်း ဖုန်းတဂွမ်ဂွမ်ဆက်ဆိုတော. …..အင်း …Secretary တစ်ယောက်လောက်များ
ငှားရင်ကောင်းမလားလို.ဗျာ ….” ဟုပြောရင်း ဆိုရင်း သင်္ချိုင်းအ၀မှနေ၍ ကားမောင်းထွက်သွားလေတော.သည် ….။
” ကိုဆာမိ ….ရှင်.မလဲ ဒီကားလေးတစ်စီးရပြီးကတဲက ကျွန်မအနားကိုမကပ်တော.ဘူး …အားအားရှိဒီကားဘဲ ပွတ်နေ
တော.တာဘဲ ….ကျွန်မတို.သားအမိတတွေလဲ ကားဝယ်ပြီးတာတစ်လလောက်သာရှိတယ် စီးကိုမစီးရသေးဘူး “
မနက်စောစောစီးစီး မဒမ်ဆာမိ ပွမ်နေလေပြီ ။ ကြားနေကြ နံနက်ချိန်ခါတေးသံသာမို. ကိုဆာမိအတွက် ဘာမှမထူးခြား ။
ဟုတ်တော.လဲဟုတ်သည် …..လူမစီးသည်. ကျူကျူသရီးချယ်ရီဝါဂွန်လေးကို ပြီးခဲ.သည်.လက ကုမ္မဏီက ခြောက်
လဆိုင်းအကြွေး ပေးနိုင်မှပေးစနစ်ဖြင်. ရောင်းပေးလိုက်သည်မို. ဆာမိတစ်ယောက် ကိုယ်ပိုင်ကားလေးရလိုက်သည် ..။
သို.သော် ……လမ်းလျောက်သလောက်ပင်မြန်အောင်မောင်းမရသော ကျပ်တည်းလှသည်.ရန်ကုန်လမ်းများတွင်
ဆာမိ ကားမမောင်းရဲပါ …..မတော် ကိုယ်.ကိုပွတ်သွား တိုက်သွားရင်ဒုက္ခ ………..
ဒီတော. ….တစ်မျိုးစိတ်ကူးမိသည် ……
” ကဲ ကဲ မင်းတို.သားအမိတွေကားစီးချင်သပဆိုရင် ဒီလောက်ကျပ်တဲ.နေ.ခင်းမှာတော.မဖြစ်ဘူးဟေ. ….စီးချင်ရင်
ညသန်းကောင်ကျော် နေပြည်တော်အမြန်လမ်းမှာ ထွက်မောင်းကြမယ် …ဘယ်လိုလဲ ..”
” သိပ်ရတာပေါ. ကိုဆာမိရယ် ….ကိုရီးယားကားကြည်.ပြီး မအိပ်ဘဲကိုစောင်.နေမယ် “
သို.နှင်. ……ညသန်းကောင်ကျော် ထိဇွဲကြီးစွာဖြင်.စောင်.နေသော ကားစီးချင်လှသည်.မဒမ်ဆာမိတို.သားအမိအား
QQ3ချယ်ရီဝါဂွန်လေးပေါ်တင်၍ ထောက်.ကျန်.ဘက်သို.တရွေ.ရွေ.နှင်.မောင်းနှင်လာခဲ.ပါတော.သည် …….။
မောင်းချိန်နှစ်နာရီခန်.ကြာအောင် မြို.ထဲမှနေ၍ ထောက်ကျန်.ဘက်သို.မောင်းရသည် …..။
” ရွှီး ….”
၀စီသံကြားတော. ကိုယ်.ကိုတားပြီဆိုတာသိလိုက်ပြီ ။ အနားသို.မော်တော်ပီကယ်တစ်ဦးရောက်လာသည် …
” ဒီက အစ်ကိုတို.က ဘယ်သွားမလို.လဲဗျ ” ဟု မော်တော်ပီကယ်ပေါက်စကမေးလေသည် …..
“သြော် ….မြို.ထဲမှာကားကျပ်လွန်းလို. မောင်းဘူးတယ်ရှိအောင် အမြန်လမ်းမှာထွက်မောင်းမလို. …”
” ဒါဆို ..ဘွတ်ကင်လုပ်ပြီးပလား ”
” ဗျာ “
” ဟုတ်တယ်ဗျ ….အမြန်လမ်းမှာလည်းကားတွေကျပ်နေလို. မောင်းချင်တယ်ဆိုရင်သုံးရက်ကြိုပြီးဘွတ်ကင်လုပ်ပေးပါ “
” ဟုတ်ကဲ. ဟုတ်ကဲ. “
ကဲ …..မဒမ်ဆာမိရေ ….ကြားတယ်မဟုတ်လား …သုံးရက်ကြိုပြီးဘွတ်ကင်လုပ် …………………………….။
ပြန်မဲ့နေက ပါရမီ မီးပွိုင့်က ပျက်ပြီး လမ်းပိတ်နေတာ
ကားမမှီတော့ဘူး ထင်ပြီး ဘုရားစာတွေရော အကုန်ရွတ်တာ
တော်သေးလို့ ကားသမားအမြန်မောင်းပေးလို့ ကားဂိတ်ရောက်တာ
ဟဲ့ဖြဲမ … အဲ့ဒီကားတွေကြပ်နေတာ .. နာတို့ စက်ရုံက ပရိုဒတ်ရှင်းမန်နေဂျာ ကကြီးမရဲ့ ..ကားနဲ့ ရွှေဧည့်သည်နဲ့ မိတ်ဆက်လို့တဲ့ဟဲ့ … ။ ရန်ကုန်မှာလည်း ဆိုးပါတယ်အေ … တစ်ခုခု အက်စီးဒန့်ဖြစ်ကြည့် … လမ်းက ပိတ်တာ အရင် … သူ့လမ်းက ဆပ်ပြာခွက်သာသာပဲရှိတာကိုး …။
အဲ့ဒီနေ့က ကားတိုက်မှုက … signal မပြပဲ မီးနီတယ်ဆိုလားပဲ … ။ တစ်ဖက်က ကားကလည်း … အလွတ်မောင်း .. တစ်ဖက်ကလည်း …တည့်တည့်မောင်းနဲ့ … ဂျိုစောင်းချင်း ခတ်ကြလေရဲ့ … ။
သူပြောတော့ သူ့အမှန်ပေါ့အေ .. ဒါပေမယ့် … ဘဲဥတွေ ဆုံးဖြတ်တဲ့အတိုင်းဆိုတော့ ကိုယ့်ဘက်က အမှားဖြစ်နေတယ် … ။ အဖြစ်မှန် ပြန်ကြည့်ရအောင်လည်း စီစီတီဗွီ ကင်မရာက တပ်မထား … ၊ မီးနီ ကြိုသတိထားရအောင်လည်း ဒစ်ဂစ်တယ်မီးပွိုင့်မဟုတ်လို့ ….. ။
အခုမိုးတွင်းရောက်တော့မယ် .. လမ်းမပေါ် ရေတွေဝပ်၊ရေကြီးတဲ့အခါ … အဲ့ဒီ ချယ်ရီဝက်ဂွန်လေးတွေရဲ့ ….. ရေစိုခံနိုင်မှုကိုမြင်ရတော့မှာပါ … ဟိဟိ ….
ဟဲ့ ဟဲ့ အာပျိုဂျီး သများနဲ့ ဆိုင်ဘူးနော် ။
နေပြည်တော် လမ်းပေါ်မောင်းတော့မယ်ဆိုရင် တူးဒိုးတွေကို သေချာ ဂရုစိုက်ပါနော် ကိုဆာ ။ သူရို့ က ဗျောက်လဲဖောက်တတ်တယ် ဆိုလား
ကိုဆာမိရေ ..ပညာသားပါပါနဲ့ ရေးထားတဲ့ သရော်စာလေးတစ်ခုပါပဲ … လက်မထောင်သွားပါတယ်ဗျို့
ဒါနဲ့ … ချယ်ရီကားကိုညဘက် မြို့ပြင်ထွက်မောင်းလျှင် ..ဟို စူပါကာစတမ်ကြီးဆို … ဘယ်အချိန် မောင်းပါလိမ့် .. အဟိ (နည်းနည်းဖွခဲ့ပြီ ) ဒက်ဂလောက် .. ဒက်ဂလောက် …
တော်တော်ကြောက်ဖို.ကောင်းတဲ. မှတ်ညဏ် …။ မသိတာဘာရှိသေးသတုန်း …..။
2014 ကို ကြိုမြင်ထားတာတော့ သဘောကျသွားပြီ..။
ကားတွေက အခုကို ရပ်ကွက်တွေထဲမှာ မနိုင်မနင်းဖြစ်နေပါပြီ။
သိပ်မကြာခင်ပဲ ရပ်စရာလဲမရှိ မောင်းလို့လဲမရတဲ့ အဖြစ်ကို ရောက်တော့မှာ။
ဘိုကင် ခေတ်တောင် ရောက်နေပြိလား။
ကားကြပ်လို့ ဘယ်မှ ကို မသွားချင်တာတော့ အမှန်ပဲ..
ကားလည်း မောင်းရတာ စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းတယ်။ နေကပူပူ ကားက ကြပ် နဲ့.. လိုရာကို မရောက်နိုင်ဘူး။ လမ်းပေါ်မှာတော့ ကားကောင်းတွေ တော်တော် များလာတယ်။
မနက်ကပဲပြောသွားတာကြားလိုက်တယ်သတင်းထဲမှာ။ အာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာ ပြည်သူလူထုကားပိုင်ဆိုင် မှု့နှုန်းက လူ ၁၀၀၀ မှာ ၁၃ ယောက်ရှိတယ်တဲ့။ မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ၁၀၀၀ မှာ ၇ ယောက်ပဲပိုင်သေးလို့ အာဆီယံနှုန်း လူ ၁၀၀၀ မှာ ၁၃ ယောက်နှုန်းကားပိုင်အောင်လုပ်မယ်ဆိုပဲ။ အဲဒါနဲ့မနက်ကတဲ့ကစဥ်းစားနေ တာ။ အခု ကိုဆာမိပိုစ့်တက်လာမှပဲ အဖြေပေါ်တော့တယ်။ လူ ၁၀၀၀ မှာ ၁၃ ယောက်နှုန်းသာကားပိုင် သွားရင် ကိုဆာမိပြောသလိုပဲ ဖြစ်သွားမှာအသေအချာမို့ လက်မတချောင်းထောင်သွားပါကြောင်း။
အင်း..တရုတ်ချယ်ရီ တောင် ၁၅၅သိန်းဆိုဘဲ..
အဓိကကတော့ ဆီစားသက်သာလို့ တက်စီလုပ်မဲ့ သူတွေ
လူတိုင်းကားစီး ၊ လူတိုင်းချမ်းသာ …ကောင်းတာပေါ.ဗျာ …
ဒါပေမဲ. …အဆင်သင်.မဖြစ်သေးတဲ.အချိန်မှာ အမျိုးမျိုးသော အမိန်.တွေထုပ်ပြန်နေတော.
ဘာမှလဲလုပ်လို.မရတဲ. …ကျုပ်တို. ငိုရမလား …ရီရမလား ….
ကိုယ်.လူကိုယ် မ,တဲ. အစိုးရဘဲအပြစ်တင်ရမလား …. လား …..လား …….
ဟုတ်တယ် ကိုဆာမိ လုပ်ချင်တာသာသိတယ်
နောက်ခါ ဘွတ်ကင် လုပ်စရာမလိုဘူး
ကျုပ်က အဘိုးကြီးမြေး မောင်မောင်ဗိုက်..
အဘိုးကြီးကို ရိပ်သာပို့ ဖို့ဘွတ်ကင်လုပ်လိုက်ဦးမယ်
ဟိုက် အဘိုးကြီးမြေးဆိုလို့အကြွေးတောင်းမလို့ လိုက်နေတာ မိပြီ။မပြေးနဲ.့ 
ဘွတ်ကင်နဲ့ စောင့်တော့ မလုပ်နဲ့ နော်။ဟီးးး
အကြွေးလာတောင်းတဲ့လူတွေများလို့ တိုကင် နံပတ် ကြိုတင်လာယူပါ
ဟုတ်ကဲ့ ခည။ဟူးးးးးးးးးမလွယ်ဘူး. ကိုဆာမိပြောသလို ဘွတ်ခေတ်ပေါ့
ဟင် ………၂၀၁၄ မှဘွတ် ရမယ်ထင်တာ ..
ခုကတည်းကလုပ်ရမယ်ဆိုတော. ……မလွန်လွန်းဘူးလား ကိုဗိုက်ရယ် …..။
အင်း ……ဇောက်တိဇောက်ထိုးတော.ဖြစ်ကုန်ပြီထင်ပ …..
ဒီနေ.ကားပြပွဲလည်း စိတ်နာလို. မသွားဖြစ် ….။
၂၀၁၄ မှာ ချယ်ရီဝက်ဂွန် စီးတုန်းလား ဦးဆာမိရဲ့
ဦးမာဃ ကတော့ နတ်ရထားပဲ စီးတာ
၂၀၁၄ မှာ အဲဒီ လှည်းတန်းခုံးကျော်တော့ ပြီးလောက်ပါတယ်နော်